मृत छोराको खाता बन्द गर्न बैंक जाँदा हात पर्‍यो १० लाख ! - Dhangadhi Khabar
बिहिबार १३, कार्तिक २०७७ ०२:३८
पूर्णबहादुरको जीवनमा अर्को समस्या आइपर्‍यो। गत फागुनमा २९ वर्षीय प्रदीपको सडक दुर्घटनामा ज्यान गयो। एक्लो छोरा गुमाएपछि पूर्णबहादुर विक्षिप्त बने।
उनी शोकबाट बाहिर आउँदै थिए। यसको चार महिनापछि घरमा एक दिन नबिल बैंकको चेकबुक देखे।
छोराको कमाइको स्रोत थिएन। तै पनि बैंकमा बुझ्दा खातामा ५० हजार रूपैयाँ रहेछ। खाता बन्द गर्ने बेला पो पूर्णबहादुरले थाहा पाए, बैंकका छोराको बीमा रहेछ।
ुबैंकका कर्मचारीलाई सोध्दा प्रदीपले दुर्घटना बीमा गरेको रहेछ,गुरूङले भने, ुबैंकले कागजपत्र, प्रहरी रिपोर्ट माग्यो।ु
बैंकले मागे अनुसार कागजात बुझाएपछि अन्ततः गत भदौमा पूर्णबहादुरले बिमावापतको १० लाख रकम पाए।
त्यो पैसाले उनलाई ठूलो राहत दियो।
ुछोराले जापान गएर त पैसा कमाउन सकेको थिएन। तर आफू नभए पनि बुवाका लागि सोचविचार गरिदिएको रहेछ,ु उनले भने, ुछोरा भएजस्तो त किन हुन्थ्यो? तर पनि खुसी लागेको छ।ु
ुउसैलाई जापान पठाउँदा र काजकिरिया गर्दा ३ लाख जति ऋण लागेको छ। त्यो तिर्छु। बाँकी पैसा बैंकमै राख्नु पर्ला,ु उनले भने।
नबिल बैंक कान्तिपथ शाखाका म्यानेजर विरूप्रसाद श्रेष्ठ बैंकले दुर्घटना बीमा रकम उपलब्ध गराउँदा धेरैले राहत पाएको अनुभव सुनाउँछन्।
पूर्णबहादुरकै उदाहरण दिँदै उनी भन्छिन्, ुउहाँले मृत्यु भएको छोराको नबिलको चेक भेट्नु भएछ। बैंकमा खाता छ, पैसा होला कि भनेर जाँचबुझ गर्न बैंकमा आउनुभयो। ५० हजार जति रहेछ। यस्तो केसमा बैंकले राम्रोसँग डकुमेन्ट हेर्छ। बुझ्दै जाँदा उहाँको छोरा बीमाको नियमभित्र पर्नु भएको कुरा थाहा लाग्यो।ु
ुबुवामार्फत्, प्रहरी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट झिकाएर कागजपत्र मिलायौं। केही समय पक्कै लाग्यो। दुःख पनि भयो। अन्ततः हामीले बीमा कम्पनी मार्फत् प्रदीपका बुवा पूर्णबहादुर गुरुङलाई १० लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गर्‍यौं। श्रीमती नभएको, एक्लो छोरा पनि मृत्यु भएपछि अहिले पूर्णजीलाई त्यही पैसाले केही भए पनि राहत दिएको छ,ु म्यानेजर विरु भन्छन्।
ुबैंकमा गरिएको बीमा वा कुनै पनि काम परिवारलाई पनि थाहा दिन जरुरी छ। कतिपय कुरा परिवारका सदस्यलाई थाहा नहुँदा फाइदा लिन सकिरहेका हुँदैनौं,ु उनले भने, ुग्राहकले जतिसक्दो फाइदा लिन सकून् भन्ने हाम्रो चाहना छ।ु -सेतो पाटी बाट
मङ्गलबार २०, असोज २०७७ ०८:१२ मा प्रकाशित
#छोरा #दुर्घटना बीमा #नबिल बैंक #राहत